१ वर्ष बित्यो तर अझै पत्ता लागेन ,कानेपोखरी ३ आगोलागी प्रकरणका दोषी – Nirantarkhabar
कानेपोखरी(मोरङ) १८ असोज । मोरङको कानेपोखरी –३ हरकपुरमा १ वर्ष अघि आगोले जलेर घरसहित एकै परिवारका चार जनाको ज्यान जानेगरि भएको घट्ना नियोजित भएको पीडित परिवारले आरोप लगाएको छ ।
काठमाडौंमा बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पीडित परिवारले आगलागीको घट्ना भवितव्य नभई हत्या भएको दाबी गरेको छ । घट्नाको अनुसन्धान राम्रोसँग नगरिएकै कारण आफुहरु अन्यायमा परेको गुनासो पीडित परिवारका सदस्यहरुले गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मृतक गंगामाया राईकी छोरी इन्दिरा राईले प्रहरीले घट्नाको सूक्ष्म अनुसन्धान नगर्दा अपराधी खुलेआम घुमिरहेको बताउनु भयो ।
राज्यले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो पीडा नसुनेको बताउँदै उहाँले ‘घट्नाको बारेमा गलत जानकारी दिने मानिसहरू माथि अनुसन्धान नहुनु, प्रहरीलाई घरबाट भाग्ने ठाउँको अभावमा मरेको हुनसक्ने भ्रमपूर्ण जानकारी गराउनुले अनुसन्धान फितलो भएको पीडित परिवारको भनाइृ छ । एक कठ्ठा जमिनको लागि चारजनाको ज्यान कसैले लिँदैन भनेर प्रहरी अनुसन्धानबाट किन पन्छिरहेको राई परिवारको आरोप छ ।’ घट्नामा शंका गर्ने आधारहरु धेरै रहेपनि प्रमाणको अभावमा किटानका साथ अघि बढ्न नसकेको इन्दिरा राईले बताउनु भयो ।
आगलागीमा परी ५६ वर्षीय चन्द्रकुमार राई, उहाँकी ८६ वर्षीया आमा गंगामाया, ४९ वर्षीया श्रीमती पार्बता र ४६ वर्षीय बहिनी बिष्णुकुमारीको जलेर मृत्यु भएको थियो । राति करिब २ बजेतिर भएको आगलागीमा उनीहरुसहित दुई तले काठको घर पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएको थियो । आगलागीमा करिव १ करोड ५० लाख बरावरको धनजनको क्षति भएको इन्दिराले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मृतक गंगामाया राईका छोरा रामकुमार वान्तवाले नियोजित रुपमा केही व्यक्तिले चारै जनाको हत्या गरी घरमा आगो लगाएर आगलागिबाट मारिएको देखाउन खोजिएको बताउनु भयो ।
२०७४ असोज ४ गते मध्य रातमा भएको आगलागी कुनैपनि कोणबाट भईपरि नभएर नियोजित रुप मै भएको पीडितहरूले दाबी गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो –‘चारै जनाको मृत्यु हुनु शंकास्पद छ, यति ठूलो घर दनदनी जलेर खरानी हुँदासम्म किन कोही चिच्याएनन ? किन कसैले हाम फालेर बाँच्ने प्रयास गरेनन् ? मेरी आमा असक्त भएपनि अन्य तीन जनामध्ये कोही एक जना त बच्नुपथ्र्यो ।’
विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको भनेर प्रहरी प्रशासन भने अनुसन्धान नगरी सुतेर बसिरहेको उहाँको गुनासो छ । उहाँले इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका ‘तत्कालीन् प्रहरी निरिक्षक राजन कार्कीको सरुवा भएपछि अनुसन्धान फितलो भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँको भनाई छ –हामीले कहिलेसम्म अपराधीलाई हेरेर बस्ने ?’ विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको भए घरको एक छेउबाट आगो लाग्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ घरको चारैतिरबाट एकैपटक आगो लागेको कारणपनि घट्ना नियोजित रुपमा गराइएको रामकुमार बान्तवाले बताउनु भयो ।
पीडित परिवारले घट्नाको बारेमा सत्य, तथ्य बाहिर ल्याउनको लागि अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसको लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।
सप्तरीका महिला समेत मोरङको जङ्गलमा निगुरो खोज्दै